2 Samuweli 19 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
19 Kamva kwaxelwa kuYowabhi kwathiwa: “Khangela! Ukumkani uyalila, yaye uyaqhubeka ezilela uAbhisalom.”+ 2 Ngoko usindiso ngaloo mini lwaba sisihlandlo sokuzila ebantwini bonke, ngenxa yokuba abantu beva kusithiwa ngaloo mini: “Ukumkani ube buhlungu ngonyana wakhe.” 3 Baza abantu banyoshoza ukungena esixekweni ngaloo mini,+ kanye njengokunyoshoza kwabantu abazihlazisileyo ngokusaba edabini. 4 Ukumkani wagqubuthela ubuso bakhe, waqhubeka ukumkani edanduluka ngelizwi elikhulu: “Nyana wam Abhisalom! Abhisalom nyana wam, nyana wam!”+ 5 Ekugqibeleni uYowabhi wangena kukumkani endlwini waza wathi: “Namhlanje ubuhlazisile ubuso babakhonzi bakho bonke, abo bawusindisileyo umphefumlo wakho namhlanje+ nomphefumlo woonyana bakho+ neentombi zakho+ nomphefumlo wabafazi bakho+ nomphefumlo wamashweshwe akho,+ 6 ngokuthanda abo bakuthiyayo nangokuthiya abo bakuthandayo; kuba uxelile namhlanje ukuba iintloko nabakhonzi abanto kuwe, ngenxa yokuba ndazi kakuhle namhlanje ukuba nokuba ibinguAbhisalom kuphela ophilayo saza thina sonke abanye sangabafileyo namhlanje, ngekulungile emehlweni akho. 7 Ke kaloku vuka, phuma uze uthethe kanye entliziyweni+ yabakhonzi bakho, ngenxa yokuba, ngoYehova, ndiyafunga ndithi, ukuba kunokwenzeka ungaphumi, akukho mntu uya kuhlala nawe ngobu busuku;+ yaye ngokuqinisekileyo oku kuya kuba kubi ngakumbi kuwe kunokwenzakala konke okukufikeleyo ukususela ebutsheni bakho kude kube ngoku.” 8 Ngako oko wavuka ukumkani waza wahlala esangweni,+ kwaza kwanikelwa ingxelo kubo bonke abantu, kwathiwa: “Nanko ukumkani ehleli esangweni.” Yaye bonke abantu baqala ukuza phambi kokumkani. Ke yena uSirayeli wayesabile, ngamnye waya ekhayeni lakhe.+ 9 Kwaye bonke abantu babandakanyeka kwimpikiswano ezizweni zonke zakwaSirayeli, besithi: “Ngukumkani owasihlangulayo entendeni yeentshaba zethu,+ yaye nguye owasisindisayo entendeni yamaFilisti; ngoku ke ubalekile kweli lizwe ngenxa ka-Abhisalom.+ 10 Ke yena uAbhisalom, lowo samthambisayo phezu kwethu,+ ufele edabini.+ Ke ngoko kutheni na ningenzi nto ukuze kubuyiswe ukumkani?”+ 11 Ke yena uKumkani uDavide, wathumela kuTsadoki+ noAbhiyatare+ ababingeleli, esithi: “Thethani kumadoda amakhulu akwaYuda,+ nithi, ‘Kutheni na ukuba nibe ngabokugqibela ekumbuyiseleni endlwini yakhe ukumkani, ilizwi likaSirayeli wonke lifikile nje kukumkani esendlwini yakhe? 12 Ningabantakwethu; nilithambo lam nenyama yam.+ Ngoko kutheni na ukuba nibe ngabokugqibela ekumbuyiseleni ukumkani?’ 13 NakuAmasa nize nithi,+ ‘Akulothambo lam nenyama yam na? Ngoko ngamana uThixo angenza kum aze ke ongezelele+ ukukwenza ukuba akuyi kusoloko uyintloko yomkhosi phambi kwam esikhundleni sikaYowabhi.’”+ 14 Wayitsala intliziyo yawo onke amadoda akwaYuda njengandoda-nye,+ kangangokuba athumela ilizwi kukumkani athi: “Buya, wena nabo bonke abakhonzi bakho.” 15 Waqala ke ukumkani ukubuyela endlwini yakhe waza wafika eYordan. Ke yena uYuda, wafika eGiligali+ ukuze ahambe aye kuhlangabeza ukumkani, amweze ukumkani eYordan. 16 Wandula ke uShimeyi+ unyana kaGera+ umBhenjamin, owayengowaseBhahurim,+ wakhawuleza waza wehla namadoda akwaYuda ukuhlangabeza uKumkani uDavide. 17 Wayenewaka lamadoda akwaBhenjamin. (KwanoTsibha+ umlindi wendlu kaSawule noonyana bakhe abalishumi elinesihlanu+ nabakhonzi bakhe abangamashumi amabini babenaye, yaye bafika ngokunempumelelo eYordan phambi kokumkani. 18 Waza yena wawela ezibukweni+ ukuze aweze indlu kakumkani nokuze enze okulungileyo emehlweni akhe.) Ke yena uShimeyi unyana kaGera, wawa phantsi phambi kokumkani xa kanye wayeza kuwela iYordan.+ 19 Ke kaloku wathi kukumkani: “Inkosi yam mayingasibaleli kum isiphoso, uze ungabukhumbuli nobubi awabenzayo umkhonzi wakho+ ngalaa mini yaphuma ngayo inkosi yam ukumkani eYerusalem, ukuze ukumkani akubeke entliziyweni yakhe oko.+ 20 Kuba umkhonzi wakho wazi kakuhle ukuba ndim owonayo; naku ke namhlanje ndibe ngowokuqala ukufika kuyo yonke indlu kaYosefu+ ukuba ndihle ndihlangabeze inkosi yam ukumkani.” 21 Kwaoko uAbhishayi+ unyana kaTseruya+ waphendula waza wathi: “Ngenxa yoku ufanele angabulawa na uShimeyi, ekubeni waqalekisa othanjisiweyo kaYehova?”+ 22 Kodwa uDavide wathi: “Ndinantoni na yakwenza nani,+ nina bonyana bakaTseruya, ukuze nje nibe ngabachasi+ bam namhlanje? Kukho nabani na oya kubulawa namhlanje kwaSirayeli?+ Kuba andiyazi kakuhle na into yokuba namhlanje ndingukumkani phezu koSirayeli?” 23 Wandula ke ukumkani wathi kuShimeyi: “Akuyi kufa.” Waza ukumkani wahlabela mgama wafunga kuye.+ 24 Ke yena uMefibhoshete+ umzukulwana kaSawule, wehla ehlangabeza ukumkani; yaye wayengazinyamekelanga iinyawo zakhe+ namabhovu akhe+ engawanyamekelanga nezambatho zakhe wayengazihlambanga ukususela kwimini yokumka kukakumkani kwada kwayimini yokufika kwakhe eseluxolweni. 25 Kwathi, ekufikeni kwakhe eYerusalem ehlangabeze ukumkani, wandula ke ukumkani wathi kuye: “Bekutheni na ukuze ungahambi nam, Mefibhoshete?” 26 Yena wathi: “Nkosi yam kumkani, ngumkhonzi wam+ owandikhohlisayo. Kuba umkhonzi wakho wathi, ‘Mandizifakele isali kwithokazi le-esile ukuze ndikhwele kulo ndize ndihambe nokumkani,’ kuba umkhonzi lo wakho sisiqhwala.+ 27 Ngoko yena wamnyelisa+ umkhonzi wakho enkosini yam ukumkani. Kodwa inkosi yam ukumkani injengengelosi+ kaTHIXO oyinyaniso, ngoko ke yenza okulungileyo emehlweni akho. 28 Kuba yonke indlu kabawo ngeyingeyonto enkosini yam ukumkani ngaphandle kokumiselwa ukufa, ukanti wena umbekile umkhonzi wakho phakathi kwabo badla etafileni yakho.+ Ngoko yintoni na endisenayo njengebango elisesikweni ukuba ndingade ndilikhalele+ ngokubhekele phaya kukumkani?” 29 Noko ke, ukumkani wathi kuye: “Kutheni usathetha la mazwi akho nje? Ndithi, Wena noTsibha nifanele nahlulelane ngomhlaba.”+ 30 Wathi ke uMefibhoshete kukumkani: “Makawuthabathe wonke,+ ekubeni ngoku inkosi yam ukumkani ifikile inoxolo endlwini yayo.” 31 UBharzilayi+ umGiliyadi wehla evela eRogelim ukuze abe nokuwela iYordan nokumkani ukuze ampheleke ukuya eYordan. 32 Ke uBharzilayi wayemdala kakhulu, njengoko wayenamashumi asibhozo eminyaka ubudala;+ yaye yena wambonelela ngokutya ukumkani ngoxa wayehlala eMahanayim,+ kuba wayengumntu omkhulu kakhulu.+ 33 Ngoko ukumkani wathi kuBharzilayi: “Wela nam wena, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukubonelela ngokutya ukum eYerusalem.”+ 34 Kodwa uBharzilayi wathi kukumkani: “Injani na imihla yeminyaka yobomi bam, ukuba ndingenyuka nokumkani ndiye eYerusalem? 35 Namhlanje ndineminyaka engamashumi asibhozo ubudala.+ Ndinako na ukuqonda phakathi kokulungileyo nokubi, okanye unako na umkhonzi wakho ukungcamla oko ndikudlileyo noko ndikuseleyo,+ okanye ndisenako na ukuphulaphula+ ilizwi leemvumi neemvumikazi?+ Ngoko kutheni na umkhonzi wakho efanele abe luxanduva+ kwakhona kwinkosi yam ukumkani? 36 Kuba ngumganyana nje umkhonzi wakho esiza kunye nokumkani eYordan, kutheni na ke ukumkani efanele andibuyekeze ngalo mvuzo?+ 37 Makabuye umkhonzi wakho, ndiyacela, ndize ndifele+ kwisixeko sakowethu kufuphi nendawo ekwangcwatyelwa kuyo ubawo noma.+ Kodwa ke nanku umkhonzi wakho uKimham.+ Makawele nenkosi yam ukumkani; uze wenze kuye oko kulungileyo emehlweni akho.” 38 Ngako oko ukumkani wathi: “UKimham uya kuwela nam, yaye mna ndiya kwenza kuye okulungileyo emehlweni akho; nako konke oko unokuthi unyule ukukubeka phezu kwam, ndiya kukwenzela kona.” 39 Ke kaloku bayiwela bonke abantu iYordan, nokumkani ngokwakhe wawela; kodwa ukumkani wamanga+ uBharzilayi waza wamsikelela,+ kwathi emva koko wabuyela yena endaweni yakhe. 40 Xa ukumkani wawelayo waya eGiligali,+ noKimham wawela kunye naye, kwanabo bonke abantu bakwaYuda, kwanesiqingatha sabantu bakwaSirayeli, ukuze baweze ukumkani. 41 Yaye, khangela! onke amadoda akwaSirayeli eza kukumkani, athi kukumkani: “Kutheni na+ ukuze abazalwana bethu amadoda akwaYuda bakube ukuze baweze ukumkani nendlu yakhe nawo onke amadoda akwaDavide kunye naye eYordan?”+ 42 Onke ke amadoda akwaYuda awaphendula amadoda akwaSirayeli athi: “Ngenxa yokuba ukumkani uhlobene ngokusondeleyo nathi;+ kutheni ke ukuze nina nibe nomsindo ngenxa yale nto? Sikhe sadla nto na ngendleko kakumkani, okanye kwaziswa kuthi isipho?” 43 Noko ke, amadoda akwaSirayeli awaphendula amadoda akwaYuda aza athi: “Thina sineenxalenye ezilishumi kukumkani,+ kangangokuba kwanakuDavide singaphezu kwenu. Kutheni, ke, ukuze nisiphathe ngendelelo, yaye kutheni ukuze lo mbandela wethu ungaqali+ kuthi wokuba kubuyiswe ukumkani wethu?” Kodwa ilizwi lamadoda akwaYuda laliqatha ngakumbi kunelizwi lamadoda akwaSirayeli.